Shiinaha warshad mashiinka fuqaya bean Broad iyo alaab-qeybiyeyaasha. BAOTE
Mashiinka diirka ZX-DL1 ee digirta Broad waa waddo gaar ah oo qalalan oo mashiinka diirka balaaran, waxtarka sare ee aan lahayn wasakhda. Markaan xoqno kadib, waxaan heli karnaa digirta ballaaran ee jirka.
Awoodda mashiinkan waxay isticmaalaan 380V, 50hz, 5.5KW oo leh walxaha aan xarka lahayn ee 304. Mashiinnadayada diirka Vicia digirta waxaa loo isticmaali karaa muddo dheer bilaa miridhku waana sahal in la ilaaliyo.
Ku mashiinka fiiqan ee fiiqan waxay u isticmaashaa duubista duubista duubista kala duwanaanta iyo xoqidda maqaarka bean ballaadhan. Heerka sare ee fiiqista, kala-goynta otomaatigga ah ee iniinta maqaarka, waxtarka sare iyo hawlgalka fudud. Digirta ballaaran ee maqaarka leh waa la cusbooneysiin karaa si loo sameeyo cunto fudud.
Faa'iidooyinka Mashiinka Xiirashada Maqaarka Balaadhan ee Bean:
1) Tan mashiinka diirka wuxuu leeyahay naqshad macquul ah iyo qaab dhismeed is haysta,
2) Isticmaalida mabda'a kudayashada quudinta gacanta iyo walxaha mashiinka gaarka ah, sidaa darteed waxay leedahay heer sare oo diirnaan,
3) Heerka kernel oo dhan oo sareeya oo aan wasakheyn iwm faa iidooyinka.
4) Mashiinka waa qalab lagama maarmaan u ah soosaarida qoto dheer ee almond, bean ballaaran iwm.
5) Digirta balaaran ee diiray ma jabaan, midabku waa hagaagsan yahay, dusha sare ma bunni, borotiinkuna waa mid aan isbeddelayn.
Ogeysiis --- Sababtoo ah qoyaanka alaabta ceyriinka ah waa kala
macmiilku wuxuu dejin karaa xawaaraha mootada iyo waqtiga diirka iyadoo loo eegayo sida dhabta ah. Guud ahaan marka la hadlayo, xawaaraha ugu fiican waa 45hz iyo waqtiga diirka waa 3-3.5minuts. Fadlan ku shaqee mishiinka Video ahaan.
Daar korontada oo taabo batoonka cagaaran. Hubso in nalka korontada cas uu shidan yahay.
② Riix batoonka cagaaran, kadib deji xawaaraha mootada ilaa 40hz-45hz (Waxaan dejinay xawaaraha 45hz).
Ur Ku shub ku dhowaad 5kgs digir ballaaran oo ceyriin ah ku rid weelka sare.
O Dhaqaaq dhagaxa godka quudinta, u oggolow in digirta ballaaran ee ceyriinka ah ay gasho haanta qashinka. Mashiinka ayaa diidi doona digirta.
3-3.5 daqiiqo kadib, dhaqaaji dhagaxa daloolka dheecaanka, digirta la dhameeyay way soo bixi doontaa.
Xiga: Mashiinka alxanka qafis
Mashiinka Fiiqan ee Qalalan
Mashiinka Fiiqa Faba
Mashiinka Fiiqida Bean Baaxad Leh Oo Qaabaysan Oo Qaabaysan
Mashiinka tuuboyinka Gawaarida Gawaarida ah, U Bolts, Gawaarida Gawaarida, Qaab dhismeedka, Hex handarraabbadeedii, Lag Bolts,